बाबुरामको चिठ्ठी- हाम्रो ‘मृत्युलेख’ लेख्ने हतार नगर, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बाबुरामको चिठ्ठी- हाम्रो ‘मृत्युलेख’ लेख्ने हतार नगर
, ६ जेठ २०७४
लामो समयको राजनीतिक अन्यौललाई चिर्दै मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । नेपाली जनताको लामो त्याग, तपस्या र बलिदानीको जगमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलो हो । हेक्का रहोस्, यो पुरानो स्थानीय निकायको निर्वाचन होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन हो । संविधानसभाबाट जनताले संविधान बनाउन पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर लडेको अभियन्ताको हैसियतले जनताले लेखेको नयाँ संविधानलाई संस्थागत गर्ने यो स्थानीय तहको ऐतिहासिक निर्वाचनमा सहभागी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
कतिपयले हाम्रो ‘मृत्युलेख’ लेख्ने हतार गर्नेछन्, तर हामी तिनलाई गलत सावित गरिछाड्नेछौं ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन मार्फत् मतदाताले केही सन्देशहरु दिएका छन् । निर्वाचनमा देशका केवल आधा दर्जन पार्टीले विजयी उपस्थिति जनाए । तीमध्ये नयाँ शक्ति पार्टी केही ठाउँमा निकट प्रतिस्पर्धामा र केही ठाउँमा विजयी भयो । समग्र परिणाम निश्चय नै हाम्रो आशा अनुरुप थिएन तर वर्ष दिन अघिमात्र खुलेको र दर्ताका हिसाबले कान्छो पार्टीको राष्ट्रिय रुपमा हामीले पाएको मतका आधारमा हाम्रो उपलब्धिलाई न्यूनीकरण गर्न मिल्दैन । यात्रा बल्ल सुरु भएको छ, अघिल्तिर सम्भावनाका अनन्त क्षितिज उघ्रिएका छन् ।
वैकल्पिक राजनीतिसँग डराएर षड्यन्त्रपूर्वक हामीलाई दलीय निर्वाचन चिन्ह दिइएन । निर्वाचनमा त्यसको पनि काफी प्रतिकूल प्रभाव पर्‍यो । तथापि छोटो समयमा हामीले अधिकांश स्थानमा उम्मेदवारी दिन सक्नुको प्रतीकात्मक महत्व छ । स्रोत र साधन अभावको चौतर्फी प्रतिकूल परिस्थितिमा हामीप्रति विश्वास व्यक्त गर्ने सबै मतदाताप्रति हामी आभार प्रकट गर्दछौं । यही विश्वासलाई पुँजीकृत गर्दै साथै कमजोरीहरुको इमानदार आत्मसमीक्षा गर्दै वैकल्पिक राजनीतिलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रण गर्दछौं ।
पुराना राजनीतिक शक्तिहरुले राजनीतिलाई यो देशको सबैभन्दा ठूलो र भ्रष्ट संगठित उद्योग बनाइदिएका छन् । यो उद्योग विघटन गर्ने र नैतिक राजनीति स्थापित गर्ने काम पक्कै कठीन छ ।
पुराना राजनीतिक शक्तिहरुले राजनीतिलाई यो देशको सबैभन्दा ठूलो र भ्रष्ट संगठित उद्योग बनाइदिएका छन् । यो उद्योग विघटन गर्ने र नैतिक राजनीति स्थापित गर्ने काम पक्कै कठीन छ । समाजका जरासम्मै फैलिएको भ्रष्ट पार्टीकरण एकै धक्कामा समाप्त हुँदैन तर यो विषवृक्ष नढलाई हाम्रो राजनीति सङ्लँदैन । काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रका मतदाताले पुराना शक्तिप्रति गहिरो सन्देह व्यक्त गरेका छन् । मत जहाँ जसरी परे पनि राजनीतिलाई बदल्ने प्रवुद्ध मतदाताको यो सचेत प्रयासको म प्रशंसा गर्दछु । पुराना राजनीतिक शक्तिहरुले राजनीतिलाई यो देशको सबैभन्दा ठूलो र भ्रष्ट संगठित उद्योग बनाइदिएका छन् । यो उद्योग विघटन गर्ने र नैतिक राजनीति स्थापित गर्ने काम पक्कै कठीन छ ।
पुराना पार्टीहरुसँग सत्ता छ, संशाधन छ, गलत ढंगले जुटाएको स्रोत छ । ती अब राजनीतिक आन्दोलन रहेनन् बरु निर्वाचन परिचालन गर्ने यन्त्र भइसके । सबै हथकन्डा अपनाएर जसरी पनि चुनाव जित्ने उनीहरुको मरिहत्ते दौडको जम्मा ध्येय सत्ता मात्रै हो । सत्ता केका लागि भनेर गम्यो भने, उही अर्को चुनाव जित्नका लागि भन्ने उत्तर फेला पर्छ । यो अर्थहीन उपक्रमको अन्त्य भएमात्र लोकतन्त्रको सही अभ्यास सुरु हुन्छ ।
यो निर्वाचनमा पनि पुराना शक्तिहरुले पैसा, बाहुवल र सत्ताको खुलेर प्रयोग गरे र धेरै ठाउँमा वैकल्पिक राजनीतिको प्रतिवद्ध मत पनि सुरक्षित गर्न कठीन भयो । हाम्रो ध्येय पवित्र हुँदाहुँदै पनि जनतासम्म त्यसको सम्प्रेषण गर्न र मत सुरक्षित गर्न हामी पछि परेका रहेछौं भन्ने हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । नयाँ शक्ति पार्टीलाई अझै नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा विकास गर्न थप मेहनत गर्नु पर्ने शिक्षा हामीले प्राप्त गरेका छौं । भरपर्दो नयाँ विकल्प नपाएसम्म मतदाता पुरानै शक्तिहरुलाई रोज्न वाध्य हुन्छन् भन्ने यो निर्वाचनले हामीलाई सिकाएको छ ।
हाम्रो ध्येय पवित्र हुँदाहुँदै पनि जनतासम्म त्यसको सम्प्रेषण गर्न र मत सुरक्षित गर्न हामी पछि परेका रहेछौं भन्ने हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । नयाँ शक्ति पार्टीलाई अझै नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा विकास गर्न थप मेहनत गर्नु पर्ने शिक्षा हामीले प्राप्त गरेका छौं ।
वैकल्पिक राजनीति आजको भोलि नै सत्ता प्राप्त गर्ने राजनीति होइन । हामी यो फोहोरी राजनीतिको तत्कालीन लाभ उठाउन यो यात्रामा छैनौं । बरु यो मौजुद राजनीतिको अर्थहीनतालाई चुनौति दिन र नयाँ राजनीतिक संस्कार र प्रणाली स्थापना गर्ने यात्रामा छौं । निश्चय नै नैतिक राजनीतिको यो बाटो सजिलो छैन । सधैं सजिलो बाटो रोजेर हिँड्ने सुविस्ता खोज्दा यथास्थिति बदल्न सकिँदैन । हाम्रो यो वैकल्पिक राजनीति विजयी नभएसम्म मुलुकको सर्वाङ्गीण उन्नति सम्भव छैन भन्ने बुझेरै हामीले यो आन्दोलन सुरु गरेका हौं । त्यसैले हामी किञ्चित विचलित भएका छैनौं । पहिलो चरणमा प्राप्त जनमतको सम्मान गर्दै हामी अहिल्यैदेखि दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका छौं ।
झण्डै सात/आठ दशकदेखि राजनीतिक अभ्यासमा रहेका दलहरु र उनीहरुले गाउँटोलसम्म बनाएका संरचना रातारात भत्काउनु सजिलो काम होइन । सामन्तवादविरुद्धको कठीन र लामो राजनीतिक लडाइँले मुलुकमा अति दलीय ध्रुवीकरणको स्थिति पैदा भएको छ । दलहरु विचार, नीति, आदर्शका वाहक भन्दा सत्ताप्राप्ति र स्वार्थपूर्तिका व्यापारिक ब्रान्ड नै बनेका छन् । यसले हामीलाई नागरिक भन्दा बढी कार्यकर्ता बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाहरु पनि सिर्जना गरेको छ । सुशासन र समृद्धिका लागि अस्वस्थ दलीय भागबण्डाको अन्त्य गर्दै स्वस्थ र प्रतिस्पर्धाको संस्कारलाई बढावा दिनुछ तर यो रातारात हुने काम होइन । फेरि पनि छोटो समयमै मतदाताहरुले साहसपूर्वक कोरिदिएको साँघुरो गोरेटोलाई फराकिलो राजमार्ग बनाउँदै सिंगो मुलुकलाई सुशासनयुक्त समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा अभिप्रेरित गर्न हामी कटिबद्ध हुनुपर्छ ।
यस चुनावी अनुभवले हामीलाई आफ्नै पुनर्निर्माणको अवसर दिएको छ । हामीले गरेका प्रयासहरुमा कहाँ कमजोरी रहन गयो भन्ने शिक्षा दिएको छ ।
कुनै खास शहरहरुमा मात्रै केन्द्रित भएर तत्काल चुनावी नतिजाको लागि काम गर्ने कि देशव्यापी वैकल्पिक राजनीतिक अभियान विस्तार गर्ने भन्ने दुई विकल्पमध्ये हामीले दोस्रो विकल्पलाई रोज्यौं । देशको चरम क्षेत्रीय र जातीय विविधताले त्यसको माग गर्दथ्यो । छोटो समयमै पनि पुराना राजनीतिक शक्तिहरुको विकृति र विसंगतिका कारण त्यहाँबाट विकर्षित भएर विकल्पकोलागि जोखिम मोल्न हिम्मत देखाउनुहुने सम्पूर्ण मतदाताहरुप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौं । राज्ययन्त्रको चरम दुरुपयोग र सत्ताशक्तिको दबदबाको बीचमा पनि विकल्पको बाटो रोज्ने हरेक मतदाताहरुको मनभित्र उम्रिएको विद्रोहको बीज अवश्य पनि छिटै टुसाउनेछ । त्यसले वैकल्पिक वृक्षको आकार लिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । प्रारम्भिक पराजय भोग्नु भनेको असफल हुनु होइन । हामी असफल त्यतिबेला हुन्थ्यौं जब हामी यो वैकल्पिक राजनीतिक अभियानमा लाग्ने हिम्मत गर्दैनथियौं । नयाँ शिशुले लड्दैपड्दै नै दौड सिक्छ र सिक्नुपर्छ ।
भरपर्दो नयाँ विकल्प नपाएसम्म मतदाता पुरानै शक्तिहरुलाई रोज्न वाध्य हुन्छन् भन्ने यो निर्वाचनले हामीलाई सिकाएको छ ।
कुनै समय संविधानसभाको माग गर्दा पार्टी–सत्ता र राज्यसत्ता दुवैको तारो बन्नु परेको थियो । आज यो माग सर्वस्वीकार्य हुँदै कार्यान्वयनमा गइरहेको छ । यसैगरी सुशासन र समतामूलक समृद्धिका नारा लगाउँदा पनि आलोचित हुनुपर्ने दिनहरु थिए । आज यो सबैको साझा नारा बन्दै गइरहेको छ । एजेन्डाको दृष्टिले नयाँ शक्ति सर्वस्वीकार्य बन्दै गइरहेता पनि यसलाई संगठनात्मक शक्तिमा रुपान्तरण गर्न आउँदा दिनहरुमा हामीले अझै जोड दिनुपर्ने सन्देश यो निर्वाचनमा मतदाताले दिएका छन् । हामी त्यसलाई विनम्रतापूर्वक स्वीकार्छौं ।
नयाँ शक्तिका अभियन्ताहरुका लागि चुनावले जहिले पनि नयाँ शिक्षा र अवसर लिएर आएको हुन्छ । यस चुनावी अनुभवले हामीलाई आफ्नै पुनर्निर्माणको अवसर दिएको छ । हामीले गरेका प्रयासहरुमा कहाँ कमजोरी रहन गयो भन्ने शिक्षा दिएको छ । त्यसबाट शिक्षा लिँदै हामी देशव्यापी रुपमा पार्टी संगठन पुनर्निर्माण र नवनिर्माण गर्दै जनता नजिक जानेछौं, जनतासँग अझै घनिभुत संवाद गर्नेछौं । छोटो समयमा हामीले पाएको यत्रो मत, हामीप्रति जनताले देखाउनुभएको मायाले हामीलाई जिम्मेवारी थपेको छ । यसले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियानमा अझ दृढताका साथ लाग्न र पुराना शक्तिहरुप्रतिको विकर्षणको सही विकल्प बन्न र बनाउन उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्न शिक्षा प्राप्त भएको छ । अहिले विश्वमा र हाम्रो देशमा वैकल्पिक राजनीतिको अनिवार्यता छ र त्यसको भविष्य उज्ज्वल छ । पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावको नतिजाले त्यसैको संकेत गरेको छ । हामी त्यसलाई विनम्रतापूर्वक ग्रहण गर्दै निरन्तर अगाडि बढिरहनेछौं ।